Renderforest: Waqtiga-saxda ah Tafatirka Video-ga iyo Moodellada animation-ka ee khadka tooska ah | Martech Zone
Waxaan dhowaan ku daahfureynaa wareysiyo taxane ah oo cusub halkaan blogga teknolojiyadda suuq geynta iyadoo lala kaashanayo Studios Zombie hal abuur leh. Podcast-keena jira ayaa leh Edge-ka Webka Raadiyaha waa wax la yaab leh oo gobol ahaan Indianapolis galabnimadii Sabtida gelinka dambe ee Xorriyadda 95… laakiin mararka qaarkood waxaan u baahanahay inaan si qoto dheer u qodno hibada aan rabno inaan ku wareysanno.
Iyada oo muusigga asalka ah ee kooxda saaxiibkiis, Brad iyo kooxdiisu ay si wadajir ah u soo bandhigeen codbixin bandhig ah. Hal istiraatiijiyad oo wax ku ool u ahayd Edge ee Websaydhka ayaa sidoo kale fiidiyowyo ka soo saaraysa Youtube-ka show-ga sidaa awgeed ayaannu taas u samayn doonnaa Waxaan doonayay inaan isku soo duwo fiidiyow hordhac ah showga laakiin uma dammaanad qaadin bixitaanka iyo shaqaaleynta koox animation ah Nasiib wanaagse, waxaan ka helay email emayl ah barxad cusub - Dhirta - yaa haysta fiidiyow-waqtiga dhabta ah ee tooska ah fiidiyowga!
Waan adeegsanay goobaha video stock si aan u helno fiidiyowyo aan boqortooyo lahayn, fiidiyoowyo firfircoon, iyo kala-guur kahor - laakiin weli waxaan u baahan nahay inaan ogaano sida loo tafatiro oo loo soo saaro fiidiyowyada nafteenna. Waxaanuna jecel nahay qandaraasleyaashayada wax ka beddeli kara soona saari kara fiidiyowyadeenna. Laakiin kani maahan xog-ururin iyo adeeg midna, waxoogaa ayaa u dhexeeya. Renderforest mar horeba waxay leedahay boqolaal fiidiyowyo fiidiyowyo ah oo aad kala dooran karto oo aad iyaga uun iskaga habeyn karto khadka tooska ah isla markaana aad bixinayso mar aad rabto inaad soo dejiso nooca qeexitaanka sare.
Si fudud u soo rar sawiradaada, wax ka beddel qoraalka oo ku daawo fiidiyahaaga daqiiqado. Dhirta waxay bixisaa noocyo kala duwan oo mashaariic fiidiyow oo tayo sare leh, oo ay ku jiraan qoyska, arooska, ama duufaanada socdaalka, fiidiyowyada duubista carruurta, fiidiyoowga ama fiidiyowyada jacaylka, fiidiyowyada xayeysiinta ama shirkadaha, casuumaadaha munaasabadda, animations sharaxe, fiidiyowyada websaydhka suuqgeynta, animations logo, typography, iyo inbadan.
Dhirta qoreysa sameeye animation khadka tooska ah iyo slideshow abuuraha qalab leh kaydinta daruur bilaash ah dhammaan fiidiyowyada cajiibka ah ee aad abuurto. Waxay leeyihiin boqolaal sheybaarro aan caadi aheyn oo horeyba ugu jiray goobta waana sahlan tahay in wax laga beddelo midkoodna adoo si fudud u tafatirinaya qoraalka ama u soo diraya sawirka aad rabto inaad isticmaasho. Waxaan ku darayaa xiriiriyeheena xiriirka la leh boostadan markaa iskuday iyaga!
Ku Bilow Renderforest
Tags: 3d fiidiyowvideo aan la taaban karinfiidiyowga dalabkavideo farshaxan ahfiidiyowga ilmahafiidiyowga xayeysiiska ahdhalashada videovideo buugvideo kirismaskanadiif ah videovideo collagefiidiyowga shirkaddavideo shirkadahamuuqaal firfircoondhacdo fiidiyowvideo sharaxevideo xad dhaaf ahfiidiyowga qoyskafiidyow fidsanfiidiyowga cuntadavideo dhiirigelin lehvideo jacaylFiidiyowyada Suuqgeyntaxusuusta videofiidiyow yarfiidiyaha gacantavideo casri ahvideo dhaqdhaqaaqatafatirka fiidiyowga ee internetkatusaalooyinka fiidiyowga ee internetkafiidiyowga xafladdavideo gabay ahwax soo saarka fiidiyowgaxigasho videovideo macquul ahbixi videoduurjoogfiidiyaha buuggavideo adeeggafiidiyow fududqiiqa fiidiyowgafiidiyowga bulshadajooji fiidiyowgatags fiidiyahavideo isbedelkafiidiyowga safarkafiidiyowga biyo-biyoodkaarooskaarooska video
Udoodid Fudud: Qalab U-doodista Bilaashka ah ee Warbaahinta Bulshada
Febraayo 26, 2015 saacadu markay tahay 10: 33 AM
Tani waa xalka ugu fiican kuwa leh miisaaniyad aad u hooseysa. Laakiin ka waran codka? Ma u baahan tahay inaad si gooni ah u iibsato taas?
Feb 27, 2015 markay ahayd 1:10 PM
Waan aaminsanahay sidaas. Waxaa jira cod si aad u macquul ah oo la awoodi karo oo ka baxsan goobaha ku yaal halkaas. Waan arki doonaa haddii aan wada heli karo liis!